महिलाहरुले प्याप स्मेयर टेस्ट गर्नैपर्छ ? - NA MediaNA Mediaमहिलाहरुले प्याप स्मेयर टेस्ट गर्नैपर्छ ? - NA Media
चिकित्सकहरु भन्छन्, ४० बर्ष उमेर काटेका महिलाहरुले प्याप स्मेयर टेस्ट गर्नैपर्छ । यद्यपि यो एक पटक मात्र गरेर हुँदैन । बर्षमा एक पटक गर्न जरुरी छ । यसले संभावित रोगको जोखिमबाट बचाउँछ । महिलाको पाठेघरको मुखमा क्यान्सर छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि यो परीक्षण आवश्यक हुन्छ । साथसाथै यौन रोगको संक्रमण छ कि छैन भनेर तथा यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोगबारे पत्ता लगाउनको लागि पनि यो परीक्षण उपयोगी हुन्छ ।